Kaspersky Key ထည့်ပုံထည့်နည်းလေးပါ...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ Kaspersky Key ထည့်ပုံထည့်နည်းလေးကို ပုံလေးတွေဖြင့် ရှင်းပြပေးထားပါတယ်...! အောက်မှာလည်း Key လေးတွေလည်းတင်ပေးထားပါတယ်...!မသိရသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်...!သီပြီးသား သူငယ်ချင်းတွေက သီးခံပေးပါလို့ပြေားပါရစေ...!"အောင်အောင်.."လည်းခုမှပညာရှာစဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြေားပါရစေ...!တစ်စုံတစ်ရာ
အမှားများတွေ့ခဲ့ရင် ထောက်ပြပေးပါလို့ ပြေားပါရစေ...! Cbox မှာလည်း ရေးသွားလို့ရပါတယ်...!
အဆင့်(၂) Old License ကိုဖြတ်ပေးလိုက်ပါ...
အဆင့်(၅)သိမ်းထားတဲ့ KEY ဖိုင်လေးကို ထည့်ပေးလိုက်ပါ...
Kaspersky Key အားလုံးအား ယခုကျွန်တော်တင်ပေးထားတဲ့အတိုင်း အသုံးပြု၍ရနိုင်ပါတယ်...!
No Response to "Kaspersky Key ထည့်ပုံထည့်နည်းလေးပါ...!"